GALMADA Archives - Galmada.net
Hadii aad u baahan tahay Raaxada aduunka ,tilmaamtan qaado.
Nolosha Bani’aadamka waxaa muhiim u ah farxadda ,waxa ayna ku timaadaa arrimo badan oo u baahan in la raadiyo Ragga aduunkan ku nool waxaa marwalba ay raadiyaan in ay helaan Raaxo midda ugu wanaagsan ee ay la qaadan lahaayeen Dumarka,hadana mararka qaar waxaad moodaa in uu jiro jaha wareer badan. Si aad u noqoto qofka […]
baashaalka iyo xatateynta haweena jecel yihiin
Cilimi baaris qota dheer oo ay sameestay Hay’ad ka Shaqeysa Cilimiga Jinsiyada oo ku taalo dalka Jarmalka ayaa dhowaan shaachasay in xiliga ugu wanaagsan galmada ay tahay xiliyada qabowga, iyadoo arintaasina raga ay raaxo waali ah ka helaaan waqtiyada qaboobaha. Daraasada ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in raga 70% ay neceb yihiin Galmada xiliyada kuleylaha […]
Maalmahaan waxaa la sheegaa naago xaasas ah oo ka dalbaya nimankooda in ka isticmaalaan gadaal (dabada) taas maxaa keeni kara, inta badan nimanka ayaa dalbada gadaal waxayna u dalbadaan meesha oo ciriiri ah oo aadna u kulul iyo sababo kaleba, tolow naagaha qaarkooda maxaa ku kallifa inay galmada dabada dalbadaan. waxaan u celin karnaa dhowr […]
Waa cilmi baaris si weyn loogu qaadaa dhigay arimaha qoyska taasoo diirada lagu saaray Raaxada laga raadsho goobaha ay diinteenu ka mamnuucday Lamaanaha is qaba taasoo ay iminka ku baraarugeen Gaaladii. Daraasada ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in raga 70% ay neceb yihiin Galmada xiliyada kuleylaha ,waxeyna daraasada haweenka caalamka kula dar daarantay in ay […]
Kintirka muxuu Raaxada u taraa+walaguso celin kara hadii laga jaray
Kintirka oo la aaminsanyahay in uu yahay xubin aad u raaxo badan oo qeybna ka cayaara raaxada dumarka xiliga galamada ayaa ah meesha uga badan ee dumarku jecelyihiin in ay ka helaan raaxada xiliga isu taga jinsiga. Culimada sayniska jinsiga ayaa waxey mudo dheer darsayeen xubintaan iyo sida ay u shaqeyso iyo guud ahaanba sirta […]
Ragga Qaar Waxa ay Jecelyiihiin In Ay Ku Sii Dhexhaayaan Malab Yarowgooda Falgalka Sariirta Kadib
Ragga ayaa waxa ay ku kala duwanyihiin dareenka iyo habka ay wax u baashaaliyaan marka la joogo hardanka sariirta, waxa ayna isa sii dheeryihiin mudada ay socoto ciyaartaasi gogosha. Hadaba Baashaal.hablaha.com ayaa waxa ay ka wareeysatay ragg badan oo soomaaliyeed, qaarkood ayaa waxa ay inoo sheegeen dhaqan ugaar ah ayaga oo waxa ayba leeyihiin in […]
Dumarku Maxey Jaceyl Yihiin Hadaba Wax Ka Ogoow Waxyaabaha Dumarka Ka Farxiyo.
Guurka farxada iyo kalsonida badan ku dhisan waa himilada uu ku himiyo qof waliba oo guur doon ah sidaa darteed waa lagama maarmaan in dadaal dheeri ah ama door muhiim ah ay wada cayaraan labada qof ee nolasha ka dhaxeeyso lab iyo dhidigba, Qormadan aad kala socotaan Allsiyaasad.com waxan kaga hadli doona siyabaha uu ninka […]
1. Haddii ay gabadhu badanaa kaa waraysato arimaha guurka, waxa ay danaynaysaa mustaqbaal iyo guri-yagleel, ee ha u daymo la’aan. 2. Haddii adiga oo aan ogayn badanaaba aad gabadha indhaha kaga qacsiisoo, oo aad aragto iyada oo kugu maqan, (ku soo eegaysa, calaashaan kaaba dhex baxday) waa aad cajab galisay waana aad qancisay. 3. Marka […]
Dareenka Nolosha:- Dagaalka Hoose ee Sariirta iyo Nuuca Dhabar jabinta
Qaababkaan waxay hawshu ka socotaa dhanka gadaale oo waxa isku beegan wejiga ninka iyo dhabarka xaaskiisa. waxanay kala yihiin sidaan soo socota ee wax badan ka baro . 1- Kolka ay haweeneydu sariirta si dhabbacaad ah ugu dul seexato, shafkeeda iyo naaseheeduna ay sariirta dul saaran yihiin, ama ku sii beegan yihiin, *Kolka wejiga, shafka, […]
Ragga Xabad u Weyn oo Qaali ka ah magaalada Tokyo
Warbixin lagu soo daabacay bogga arrimaha bulshada ee ka faalooda waxyaabaha la xiriira bulshada ayaa waxa uu qoray in magaalada tokyo ee dalka japan ay qaali ka yihiin ragga u weyn xabadka. Waxaa arintaani lagu macneeyay in ay tahay mid aad u soo jiidaney hablaha kuwaas oo xiiseeya ragga nuucaasi ah jio ciong aa ah […]
Noocyada Galmada Sawiro
Galmada dadab-dabka ah oo wax badan ku soo kordhisa dareenka dumarka
oo aad ugu barateen warbixinada arrimaha Bulshada ayaa warbixintan waxaan idiin kugu soo gudbineynaa warbixin xiiso badan oo aan filayo in ay ka faa ideysan doonaan dhammaan aqristayaasha hadanews.com ee daafaha dunida kuwada baahsan. Warbixintan ayaa sheegeysa in galmada dadab-dadabka ah ay wax weyn ka badali karto arrimaha raaxada ama dareenka qofka dumarka ah ,waxaana […]
Galmada ugu macaan aduunka + Sawiro
Naagaha waxay ugu jecelyihiin inay dhabar dhabar u seexdaan oo kaddib ninka ku kor seexdo, si daran ayay ugu raaxaysanayaan qaabkan, maxaayeelay waxaa isku dhegaya qaska ninka iyo qaska haweeneyda wuxuu ku yeelanayaa saamayn weyn culayskaas soo fuulaya farjigeeda, qaabka labaad ku soo xiga qaabkani waa inay haweeneydu ninka ku kor fariisato iyadoo si fiican […]
Sıda lagu shaacıye page ay leeyıhın qubaro ka faalota arımaha Galmada oo udhalatay wadanka Mareekanka ayaa shaacıyay ın raaxo macaan ıyo walıba bıya bax deg deg laga helo Dumarka Qeybta danbe marsada xılıyada ay socoto kareemka ama salııda. Quburadaan ayaa shaacıyay ın raga raaxo macaan ay kahelaan dumarka marsada xılıyada galmada kareemo qaarka danbe jırka […]
Qaabka Wasmada‎ naagaha ugu jecelyihiin DAAWO MUQAALKA
Qaabka Wasmada‎ naagaha ugu jecelyihiin DAAWO MUQAALKA Naagaha waxay ugu jecelyihiin inay dhabar dhabar u seexdaan oo kaddib ninka ku kor seexdo, si daran ayay ugu raaxaysanayaan qaabkan, maxaayeelay waxaa isku dhegaya qaska ninka iyo qaska haweeneyda wuxuu ku yeelanayaa saamayn weyn culayskaas soo fuulaya farjigeeda. DAAWO MUQAALKAAN CAAJIIBKA AH Qaabka labaad ku soo […]
Ninkega Igama Maseero , Miyuusan I Jecleyn Mise? Tala Celin
Ninkega Igama Maseero , Miyuusan I Jecleyn Mise? Tala Celin Ma jecleyn in aan arintaan soo bandhigo balse ka gun gaaridda xaqiiqdeeda ayaa ah waxa igu qasbay ayay ku biloowday Ayaan Muqtar oo nagala soo xariirtay magaalada Muqdishu . Hadaba bahda Heegan24.net soo koobeysa muhiimada fariinta Ayaan ayaa u dhigneyd in ay dareemeyso in […]
Arimahaan Waxa Ay Si Fudud Ku Dilayaan Naxariista Jaceylka
Arimahaan Waxa Ay Si Fudud Ku Dilayaan Naxariista Jaceylka Waxaa jira arimo badan oo dili kara jaceylka ninka hadaba waxa ay gaaloos.com gabaryaheey ku siineeysaa dhowr arin oo ay muhiim tahay in aad iska ilaaliso si jaceylka uusan u dhiman . 1- Jees jeesidda Iyo Dhaawacidda Dareenka: jees jeesidda waa arin aad u xun […]
Guurdoon matahay Fadlan Qaado Talada Deeqa Axmed Muuqalkani Ay Kuugu Soo Gudbisay Deeqa Waa Gabadh Dhalinyar ah Oo..
Haddii Aad Guurdoon Tahay Fadlan Qaado Talada Deeqa Axmed Muuqalkani Ay Kuugu Soo Gudbisay Deeqa Waa Gabadh Dhalinyar ah Oo.. Ku Xeel Dheer Arrimaha Qoyska Iyo raaxada guurka intaba Waxa ay kasoo hawl gashay isbitaalka borama, Muqdisho ,Hargeisa, Boosaso haddaba fadlan daawo gabadhan Riix Halkan Oo Daawo Deeqa Axmed Guurdoon matahay Fadlan Qaado Talada Deeqa […]
ukunta oo kacsiga kordhiso
Ma Ogtahay Ukunta Inay Kordhiso Biyaha Ragga Iyo Awooda Galmada Ninku Haddi u 4 Xabo Oo Ukun Ah Cuno Maalintii Maxaa Isbadal Ah Ee Iman Kara Dhan Kacsiga….Ukunta ayaa dhawaan la xaqiijiyay inay si xawli ah u kordhiso biyaha ragga kacsigana badiso ninkuna kacsi uu la miir beelo Riix Halkan Oo Daawo Naag ka sheekaynaysa […]
HAWEENKU WAA NOLOSHEENA EE SIDAAN U SAMEY GAC
Ragga somaliyeed uma quudhan xaaskooda inay ugu yeedhaan weedho kalgac iyo muxubo xanbaarsan. waxay u haystaan hadii gabadha la guursdo oo la mehersado inay iyagu leeyahiin ooy maamulaan siday doonana way ula dhaqmaan. Qoysas badan oo dumay waxa baabi’yay is fahan la’aan ka dhex-dhalatay gabadha iyo ninkeeda, isfahan la’aantani intabadan waxa masuul ka ah ragga […]
KU JECLOOW XAASKAGA 10KAAN ARIMOOD
KU JECLOOW XAASKAGA : 1- Jeclaaw goortii ay kugu dhiirigeliso inaad tukato. Waxay rabtaa inaad Jannada ku kulantaan. 2-Jeclaaw goortii ay ku weydiiso inaad caruurta la ciyaarto, Waxay rabtaa inaad Aabenimaada ay dareento. 3-Jeclaaw goortii ay maseyrsan tahay. Waxay Rabbtaa inaad dareento ragga dunida jooga oo idil inay adiga kaa dooratey. 4-Jeclaaw goortii ay ku […]
galmada oo laga qaado cayil
Damaca galmada oo aan aheen sidii hore : isbadal Yaab leh ayaa ku yimaada markii naagtu…. — Ninak uma sahlana in uu kacsigiisa uu isla markii ugu xog warama xaaskiisa balsa waxaa jiro astaamo aad ku garan karto in ninkaaga uu ka caajisay ama uu ka qaaday boring in uu kula sameeyo galmo.Labada qof ee […]
Qoyaanka kasoo daata xubinta taranka haweenka Ragu waxa ay ka helaan adeeg
Qoyaanka xubinta taranka ay leedahay ayaa ah mushkilad aad u badan oo haween badan ay ka sheegtaan taasi oo ku beerta wel wel oo ku aadan badnaashaha qoyaankaas , waxaana arintaan ka sheegta 60% haweenka. Qoyaan dheecaaneedkaas ayaa midab ahaan cad , waa uu jiid-jiidmayaa waxa uuna dhab aana u shabahaa dheecaanka ukunta oo kale. […]
Galmada ay xaaska kaaga baahantahay
Waxaan maanta idiin heynaa barnaamij cusub oo kamid ah barnaamijyadii taxana ahaa ee arimaha bulshada ee Heegan24.net. Maanta qdobkeena wuxuu ku sabsanyahay qaab loo kordhin karo kacsiga si fiicana loogu qancin karo xaaskaaga Hadaba samee amuurahan hoos ku xusan. Soo qaado ama soo diyaarso koob Malab ah iyo koob barkii Basal la ridqay ah, oo […]